Degmada Woodbury waxay ku dartay laba dhimasho oo kale oo la xiriirta COVID 24-kii saacadood ee la s | KWIT
Degmada Woodbury waxay ku dartay laba dhimasho oo kale oo la xiriirta COVID 24-kii saacadood ee la s
By Halima Osman • Jan 13, 2021
Degmada Woodbury waxay ku dartay laba dhimasho oo kale oo la xiriirta COVID 24-kii saacadood ee la soo dhaafay wadar ahaan 175 tan iyo bilowgii cudurka faafa. Waxaa jiray 46 kiis oo dheeri ah.
Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee Iowa ayaa soo warisay in 10 qof oo kale oo Iowans ah ay u dhinteen cudurka in ka badan 4,200 (4,232) iyo ku dhowaad 1,900 xaaladood oo dheeri ah wadar ahaan 300,000 natiijooyin tijaabo oo togan.
In ka badan 50 gobol oo Iowa ah waxay leeyihiin celcelis celcelis ahaan 14-maalmood oo macquul ah oo ka sarreeya 15%, heer tilmaamaya faafidda fayraska bulshada ee muhiimka ah. Taas waxaa ka mid ah Degmada Woodbury oo leh 15.4%.
Caafimaadka Degmada Siouxland wuxuu leeyahay waji qariya, masaafadaada iska ilaali, gacmaha iska maydh, guriga joog marka aad jiran tahay, iskana ilaali shirarka aan muhiimka ahayn.
Saddex xubnood oo dhawaan loo dhaariyey aqalka Mareykanka kana soo jeeda gobolka Iowa ayaa sheegaya in ay "maya" u codeyn doonaan xil ka qaadista madaxweyne Donald Trump. Waxay kala yihiin Randy Feenstra oo ka tirsan Hull, Ashley Hinson oo reer Marion ah iyo Mariannette Miller-Meeks oo Ottumwa ah.
Dhanka kale, wakiilka kaliya ee Dimuqraadiga ah ee Washington, Cindy Axne ayaa sheegtay inay u codeyn doonto qodob qodob ka mid ah xil ka qaadis ka dhan ah madaxweynaha.
Jeegaga kicinta federaalka ayaa imanaya xisaabaadka bangiga ee Iowans iyo sanduuqyada boostada, halk
By Halima Osman • Jan 12, 2021
Jeegaga kicinta federaalka ayaa imanaya xisaabaadka bangiga ee Iowans iyo sanduuqyada boostada, halka kuwa wax khiyaameeya ay rajeynayaan inay dadka ka dhaadhiciyaan lacagtaas - taas oo noqon karta dhowr boqol oo doolar.
Afhayeenad uhadashay Better Business Bureau waxay leedahay Iowans waa inay taxaddar badan lashaqeeysaa cidkasta oo kula soo xiriirta oo ku saabsan lacagaha kicinta.
Waxay leedahay si toos ah ha uga jawaabin ama ha uga jawaabin wicitaanka, qoraalka, ama emaylka, laakiin raadi macluumaadka saxda ah ee hay'adda dawladda oo toos ula xiriir.
Sharci-dajiyayaasha gobolka ayaa ku soo laabtay Iowa Capitol maanta. Waxbarashada, canshuuraha, naba
By Halima Osman • Jan 11, 2021
Sharci-dajiyayaasha gobolka ayaa ku soo laabtay Iowa Capitol maanta. Waxbarashada, canshuuraha, nabadgelyada ayaa ah ahmiyadaha ugu weyn ee sharci dejinta Iowa ee 2021
Waxaana ku soo biiray gudaha in ka badan 200 mudaharaadayaasha ka hortagga maaskaro.